KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Kooxda Shabaab oo guulo ka Sheegatay Dagaalkii Janaalle
Thursday 21 February 2013 11:12
Kooxda Shabaab oo guulo ka Sheegatay Dagaalkii Janaalle
Muqdisho (KON) - Cabdulcasiis Abuu Muscab af hayeenka dhinaca hawl galada ee maleshiyaadka kooxda al Shabaab oo dhinaca Khadka shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka war bixiyay dagaal uu sheegay in uu ka dhacay Degaanka Janaale ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Af hayeenka ayaa sheegay in dagaalkaasi ay soo qaadeen Cutubyo ka tirsan Ciidamada isla markaana ay ka soo qaadeen illaa seddax Jaho oo uu kala sheegay Kontoroolka Janaale laga soo galo, Xarunta maamulka iyo fariisin ay Ciidamada Ugaandha ay ku lahaayeen Duleedka Janaale.
Abuu Muscab ayaa farta ku fiiqay in Dagaaladaas oo si Geesinima leh ay u qaadeen maleshiyadooda in meesha ugu daran ay ahayd fariisinka Ciidamada amisom ee ku yaalay duleedka Magaalada halkaasna ay gudaha u galeen fariisinkaasi ciidamadooa waa siduu hadalka u yiriye kuna dileen Askar gaaraysa illaa shan iyo labaatan.
Af Hayeenka ayaa intaa ku daray in dhankooda dagaalkasi ay kaga geeryoodeen seddax maleshiyo isla markaana uu dhaawac fudud ka soo gaaray mid ka mid ah maleshiyadaas.
Af hayeenka Dhinaca Hawl galada ee maleshiyada al Shabaab ayaa sheegay in Dagaalkaasi uu ahaa mid ay si weyn uga Guuleysteen cadwogii isla markaana ay ku dhufteen dhirbaaxo xoog leh isagoona ku sii daray hadalkiisa in ay sii wadayaan dagaalada ceeynkaas ah.
kooxda al Shabaab ayaa indhawaalaba meelaha qaar waxa ay ka gaysanayeen dagaalo ku dhufo oo ka dhaaqaaq ah iyadoo dhinaca kalena Hadalkan ka soo yeeray aysan jirin Ilo ka madax banaan maleshiyada kooxda alShabaab oo dagaalkaas sheegaya.
Si Kasta Degaanka janaale ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa uu ka mid yahay Degaanadii dhawaanta Ciidamada dawladda oo garabsanaya kuwa amisom ay kala wareegeen Shabaab halkaasoo iminka ay ku sugan yihiin Ciidamada dawladda iyo kuwa amisom.